भाविष्यको मार्गचित्रः ज्यूँदो जाग्दो सपना - प्रभात खबर
२०७८ भाद्र ७, सोमबार १७:०७
कोही काँचो सपना
कोही साँचो सपना
सम्हाल्दै आफूलाई उठे पुग्छ,
मन मष्तिष्क जुटे पुग्छ
निदाउनु पर्दैन सपना देख्न
आफ्नो भविष्य आफै लेख्न ।।
सपना देख्नु सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ । सपना सामान्य मान्छेले पनि देख्छ । तर, त्यो सपना सामान्य भएर बाँचिरहन्छ । अभाव र अशिक्षाले हरबखत उसलाई गाँजिरहन्छ । किन ? किनकी उसको सपना वलियो थिएन । सपना देख्न साहस चाहिन्छ । सपना त्यो होइन जो सुतेर मात्र देखिन्छ । सपना त्यो हो जो हिड्दा हिड्दै देख्न सकिन्छ । तपाई सपना देख्न चाहानुहुन्छ रु यदि चाहानुहुन्छ अँध्यारो सपना होइन उज्यालो सपना देख्ने गर्नुहोस् ।
जिन्दगीमा तपाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । सपना सदैव लक्ष्यसंग जोडिएको हुन्छ । लक्ष्य विहीन सपना कहिल्यै पनि सार्थक हुनसक्दैन । सार्थक सपनाको लागि जिन्दगीलाई लक्ष्यसंग जोड्न सक्नु भनेकै वास्तविक सफलता हो । यद्यपि, हरेक मान्छेको आआफ्नै लक्ष्य होला । हरेक मान्छे लक्ष्यमा पुग्न चाहान्छन् नै । तैपनि, त्यो लक्ष्यमा पुग्न अगावै मान्छेले विचमै धर्यता गुमाउँछ । कारण खोतल्दै जाँदा धेरै हुनसक्छन् । धेरै कारणहरु मध्येको एक कारण योजनाको अभाव हो ।
विना योजनाको लक्ष्य एक कोरा चाहाना हो । हरेक मान्छेले अरुलाई हेरेर आफ्नो सपना बनाउँछ । अरु जस्तै बन्न आफू लालायित बन्छ । तर, उभित्रको क्षमता र प्रतिभालाई उसले कहिल्यै चिन्न सक्दैन । र, सकेन पनि । हरेक मान्छेभित्र कला, क्षमता र प्रतिभा हुन्छ । नाँच्ने, गाउने, बोल्ने, चित्रकला, बस्तुकला, खेल्ने लगाएत अरुलाई प्रभाव पार्ने हरेक कलाहरु हरेक मान्छेमा हुन्छ । तर, हामीले कहिल्यै पनि ख्याल गरेनौ कि मभित्र के कला छ रु मैले के गर्न सक्छु रु मेरो जन्मको सार्थकता के हो रु हामी सदैव अरुजस्तै बन्न चाह्यौ । आफूजस्तो कहिल्यै बन्न चाहेनौँ । सदैव फोटोकपी बनेर बाँच्न चाह्यौँ । हामीभित्रको मूख्य गुदीलाई चिन्न सकेनौँ ।
ख्याल गर्नुहोस् मुल कपी र फोटोकपीमा आसमानको फरक छ । आफू आफूजस्तै भएर बाँच्नु भनेको मूल कपी हो । आफू अरुजस्तै भएर बाँच्न खोज्नु भनेकै वास्तवमा फोटो कपी हो । त्यसैले लक्ष्य लिएर जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन योजनाहरु बनाउन सक्नु भनेकै जिन्दगीमा सफल हुनु हो । कोही गायक बनेको देखेर गायक बन्न खोज्नु , चलचित्रको नायकलाई देखेर आफूलाई नायकको कल्पनामा डुबाउनु र कसैको बोलीको प्रभावमा भावनामा बहकिएर आफ्नो मनलाई बहकाउने मान्छे जिन्दगीमा कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।
हामीले बाह्य दुनियामा हरेक प्रश्न गर्यौँ । हरेक प्रश्नहरुको उत्तर पनि दियौँ । तर, ती प्रश्न र उत्तरहरु भौतिक दुनियाको सतही बनेर गए । बाह्य दुनियाको प्रभावमा परेर हामी केही क्षण रमायौँ । हाँस्यौँ, खेल्यौँ र कुद्यौँ पनि । तैपनि, हामीभित्रको संसार शून्यतामा कावा खाइ रह्यो । शून्यताले हामीलाई डस्न कहिल्यै छोडेन । हामी हाँस्दा हाँस्दै रुन बाध्य भयौँ । खेल्दा खेल्दै हाम्रा पाइलाहरु टक्क अडिन बाध्य भए । फलस्वरुप, हामी मौनताको कैदी भएर बाँच्न विवश भयौँ । बाह्य दुनियाको ऐनामा हामीले आफ्नो चेहरालाई सजाउन खुवै कोशिस गर्यौँ । तर, अन्तरमनको दुनियामा हामी कलंकित बनिरह्यौँ ।
बाहिरको ऐनामा तपाई आफूलाई जस्तो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ । बाहिरको दुनियालाई तपाई आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्नुहोला । तर, अन्तरमनको दुनियालाई तपाई आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्नु भएन भने जिन्दगीभर अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
अन्तरमनको दुनियालाई आफ्नो अनुकुल बनाउन माइन्ड पावर मज्बुत बन्नुपर्छ । माइन्ड पावर भनेकै इच्छाशक्ति हो । मनको आन्तरिक उर्जा हो । शरीर जतिसुकै बलियो भए पनि मनमा उर्जा छैन भने कुनै पनि कामको प्रतिफल दीगो हुनसक्दैन । यतिवेला मलाई एउटा कहानीको याद आयो । गाउँमा पानीको हाहाकार परेछ । त्यो गाउँमा धारा कुवा, इनार कसैको पनि थिएन । सबैजना खोलाको पानी पिउने गर्थे । गाउँदेखि खोला धेरै टाढा थियो । घण्टौ हिडेर पानी ल्याउनु पथ्र्यो ।
गाउँका मान्छेलाई पानीको ठूलो समस्या थियो । त्यो दर्दनाक अवस्थालाई देखेर गाउँकै एक जना मान्छेले कुवा खन्ने सोँच बनाएछ । कुवा खन्ने लक्ष्य लिएको मान्छेले कुवा कहाँ खन्ने भनेर आफ्नो घरको वरिपरि खुवसंग नियालेछ । खुवा खन्नको लागि घर वरिपरिको जग्गाको छनौट गर्दै एक महिनाभित्रमा कुवा खनिसक्ने योजना पनि बनाएछ । कुवा खन्नको लागि चाहिने औजारहरु लिएर केही समय पछि उ कुवा खन्नको लागि जुटेछ । उसको योजना मुताविक कुवा खन्न शुरु भयो । करिव करिव १० हात खनिसकेपछि उसलाई त्यहाँबाट पानी निस्किदैन भन्ने लागेछ । उसले त्यो ठाउँ बन्द गरि अर्को ठाउँ खन्न सुरु ग¥यो । खन्दै जाँदा जमिन मुनिबाट कंक्रिट ढुंगाहरु निस्किन थालेछन् । त्यो देखेर उसलाई लागेछ । अहो १ यहाँ पनि पानी निस्किन गाह्रो छ ।
केही समय पछि त्यहाँ पनि खन्न बन्द गरेर अर्को ठाउँमा खन्न थालेछ । खन्दै जाँदा गाउँकै एक जना मान्छेले भनेछ, ‘तिमी पनि कस्तो मुर्ख मान्छे हौ, यस्तो ठाउँमा पानी निस्किन्छ रु पानी निस्किनको लागि बलौटे माटो चाहिन्छ । ’ उसको कुरा सुनेर कुवा खन्ने गाउँले एकछिन सोचमग्न भएछ । घर अगाडि बलौटे माटो देखिए पछि खुसि हुँदै त्यहाँ खन्न थालेछ । करिव करिव १५ हात खनिसकेपछि अर्को गाउँले आएर भनेछ, ‘अरे, दुख नगर भाई । यो गाउँमा कुवा खनेर पानी निस्किदैन । मैले गत साल ३० हात खन्दा पनि पानी ननिस्किएर त्यसै छोडेको । अव तिमीले के सकौला रु उसको कुरा सुनेर उसको जोश जाँगर ह्वात्तै घटेछ । उसले आफ्नो परिश्रम व्यर्थैमा गएको ठान्दै निराश हुनथालेछ । त्यसपछि उसको मनमा कहिल्यै पनि कुवा खन्ने सोच पलाएन ।
अव ख्याल गर्नुहोस् गाउँलेले कुवा खन्ने लक्ष्य लिएकै थियो । के पुरा भयो रु खुवा खन्ने योजना पनि बनाएकै थियो । योजना मुताविक अगाडि पनि बढेकै थियो । तैपनि, उ सफल हुन सकेन । किन रु किनकी उसले धैर्यता गुमायो । कुवा खन्दै जाँदा ५ ठाउँमा १०÷१० हातका दरले खाल्डो खन्यो । उसले करिव ५० हात बराबरको खाल्डो खनिसक्यो । अन्तमा उ निराश भएर पछि हट्नु पर्यो । यदि उसले एकै ठाउँमा ५० हात बराबरको खाल्डो खनेको भए अवश्य पनि पानी भेट्न सक्थ्यो । र, उसको कुवा खन्ने लक्ष्य पुरा हुन्थ्यो ।
सफलताको सिढी लक्ष्य र योजनासंगै धैर्यतासंग जोडिएको हुन्छ । हामीभित्र धैर्यताको कमी छ कि छैन ? त्यो कुरा समयमै ख्याल गर्न सकिएन भने सफलता हात लाग्दैन । धैर्यता भनेकै निरन्तरता हो ।
कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु ठूलो कुरा होइन । निरन्तरता दिनु जीवनको अपरिहार्य तत्व हो । लागि सबथोक गुमाउनु पर्छ । तर, हामी कमाउनमा बानी परेका छौँ । गुमाउन हामी केही चाहाँदैनौं । लक्ष्यहरु भनेको जीवनको मार्ग चित्र हो । त्यही मार्गचित्रको आधारमा जीवन अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । अन्यथा, सपना सपनामै सिमित हुन्छ ।